Sarkaal Boolis ah oo Loo Maxkamadeynayo Dilka Muwaadin Soomaliyeed – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
Sarkaal Boolis ah oo Loo Maxkamadeynayo Dilka Muwaadin Soomaliyeed
Sarkaal ka Tirsan Booliiska Ottawa ee dalka Canada ayaa wajahaya eedeemo ah in uu dil bareer ah u geystay nin Soomali Canadian ah sida baaritaano booliiska ay sameyeen lagu sheegay.
Sarkaalkan ayaa lagu magacaabaa Daniel Montsion oo 36 jir ah waxa uu dil ula kac ah u geystay Abdirahman abdi oo ah muwaadin Soomaaliyeed da’diisuna tahay 37 jir.
Eedeemahan ayaa waxaa ku dhawaaqay madaxa baaritaanada sirdoona dalkaasi ee (SIU) kuwaa oo waday muddo 7 bilood dacwada la xiriirta dilkan loo geystay muwaadinkan Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka Canada.
Muqaalo lagu baahiyay baraha Youtube-ka ayaa muujinayay iyadoo dhulka uu yaalo abdirahman abdi waxaana qoyska wiilkooda la’dilay ay sheegeen ay ku faraxsan yihiin baaritaanada waaxda dambi barista dalakasi ay sameeyeen kuwaa oo lagu soo qabtay sarkaalkii police-ka ahaa ee falka geystay.
ka dib dilka loo geystay muwaadinkan Soomaaliyeed waxaa magaalada Ottawa ee dalka Canada ka dhacay dibad baxyo lagu cod sanayo in maxkamada la soo taago shaqsigii falka geystay iyadoo cabsi xoogan ay arintan ka muujiyeen jaaliyada Soomaalida ee ku nool gudaha dalka Canada.